Xaqiiq: Aragtida xeerarka ee dhacdadan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xaqiiq: Aragtida xeerarka ee dhacdadan
Publicerat måndag 3 juni 2013 kl 10.16
Dalka ayaaney illaa hadda ka jirin xeerar-ciqaab ee lagu xadiddeyo waxa lagu magacaabo neceeybka iyo xumaanta la isugu geeysto bogagga aaladda internet-ka, hase yeeshee ey dhacdoonkaasi hoos imaneyaan xeerarka iminkaba jira sida gef-ka-sheegga, meel kaga dhaca, hanjabaadda, daba-gal iyo wixii la mid ah iyadoona mar walba laga eegeyo waxa uu falku salka ku hayo iyo wixii dhacay.
Haddii uu mataln shakhsi ku yiraahdo ruux kale waan ku garaacin, wuxuu geleyaa xeerka hanjabaadda, haddii uu xumaan ka sheegana wuxuu hoos imaneyaa xeerka wax xun ka sheegga.
Dacwada la xiriirta wax xun ka sheegga ayaa loo baahan yahay in ruuxa loo geeystey uu dacwad ka abuuro haddii uu doonayo. Haddiise uu xeer-ilaaliye middaa ku tallaabsanayo waxaa loo baahan yahay iney tahay mid bulshada uu dalabkeedu ka yimid oo weliba u muuqato inay jirto sabab ah in shakhsiga loo geeystay uu yahay ruux aan qaan-gaar ahayn. Waa wax aan inta badan dhicin. 3 boqolkii dacwooyinka meel ka dhaca ah ee la diiwaan-geliyo ayaa maxkamad la hor-geeyaa. Iyada oo sababo kala duwan aawadood ey adag tahay iney gaaraan heer maxkamadeed dacwooyinka sharaf kaga dhaca ee aaladda internet-ka la isugu geeysto. Eyna ugu wacan yihiin iyada oo aan lagu caddeeyn karin cidda ka dambeeysa,.
Haddiise ay xaaladdu soo gaarto maxkamad sida dacwaddan instagaram ee maanta ka furantay magaalada Göteborg lana xiriirta meel kaga dhac culus lagu musteysan karaa ganaax iyo ugu badnaan laba sannadood oo xarig ah.
Tusaale waxaa dembiyada xukunka lagu riday ee meel kaga dhaca culus ee sharafta ruuxa loo soo qaadan karaa nin soo dhigay bogga internetka ee Facebook sawirro qaawan ee gabadh ey wada noolaan jireen dabadeed kolkii ey ka tagtay, isagoo sidoo kale qoraal galmooyin la xiriira kagala sheekeeystay shan nin ee ka mid ahaa saaxiibadii gabadha. Sannadkii tagay ayay maxkamadi ku xukuntay ninka falka geeystay ciqaab ah 60 saacadood oo uu bulshada u qabto shaqo mushaar la'aan ah iyo inuu siiyo haweeneyda uu fal-dembiyeedka u geeystay mag-dhow gaarsiisan 20 000 oo koronka iswiidhishka ah.
Waxaa muuqata iney kor u kacayaan falal-dembiyeedyada noocan ah, sida ku cad tira-koob ay soo saartay hayadda ka hor-tagga dembiyada ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaanno BRÅ. Kuwaasina oo laba jibaarmey wixii ka dambeey sannadkii 2002